ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ (အင်္ဂလိပ်: Biodiversity) ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိ၏ ဇီဝဆိုင်ရာ မျိုးကွဲနှင့် ရရှိနိုင်မှုဖြစ်သည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲသည် မျိုးရိုးဗီဇ၊ မျိုးစိတ်နှင့် ဂေဟစနစ်အဆင့်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်းနေ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲမှာ အီကွေတာအနီးတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုကြီးမားသည်။ အကြောင်းမှာ ပူနွေးသောရာသီဥတုနှင့် မြင့်မားသော ပင်မ မျိုးပွားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အညီအမျှ ဖြန့်ကျက်မနေပေ၊ အပူပိုင်းဒေသတွင် ပိုမိုပေါကြွယ်ဝသည်။ အပူပိုင်းသစ်တောဂေဟစနစ်များသည် ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာရှိသော်လည်း ကမ္ဘာ့မျိုးစိတ်ပေါင်း၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ထောက်ပံ့ထားသည်။ အဏ္ဏဝါ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲသည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်ဘက်ရှိ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အပူချိန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲသည် အစုအပြုံဖြင့် ပိုမိုဖြစ်ထွန်းပြီး အချိန်နှင့်အမျှ ပိုမိုများပြားလာလေ့ရှိသည်။ သို့သော် သစ်တောပြုန်းတီးမှုများကြောင့် အနာဂတ်ကာလတွင် နှေးကွေးနိုင်ဖွယ်ရှိလေသည်။
အလွန်လျင်မြန်စွာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်မှုများကို ဖြစ်စေသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေထိုင်ကျက်စားကျင်လည်ခဲ့ဖူးခဲ့သမျှသော မျိုးစိတ်ပေါင်းအားလုံး၏ ၉၉.၉ ရာခိုင်နှုန်း မျိုးစိတ်ပေါင်း ၅ ဘီလီယံခန့်သည် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားမည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။ လက်ရှိ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိနေသော မျိုးစိတ်များမှာ ၁၀ မီလီယံမှ ၁၄ မီလီယံခန့်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ယင်းတို့ထဲမှ ၁.၂ မီလီယံကို စာရင်းပြုစုနိုင်ထားသော်လည်း ၈၆ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုမူ သေချာစွာ မှတ်တမ်းမတင်နိုင်သေးပေ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဆက်စပ် DNA အခြေပြု စုံတွဲများပမာဏမှာ ခန့်မှန်းခြေ 5.0 x 1037 ရှိပြီး အလေးချိန်တန် ၅၀ ဘီလီယံ ရှိသည်။ နှိုင်းယှဉ်ရသော် ဇီဝလွှာ (biosphere) ၏ စုစုပေါင်းဒြပ်ထုမှာ ကာဗွန်တန်ချိန် ၄ ထရီလီယံခန့်နှင့်ညီမျှသော ဒြပ်ထုရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။
ကမ္ဘာ၏ သက်တမ်းသည် နှစ်ပေါင်း ၄.၅၄ ဘီလီယံ ရှိသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အစောဆုံးတည်ရှိခဲ့သော သက်ရှိ၏ သက်သေအထောက်အထားမှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃.၅ ဘီလီယံအကြာကဖြစ်သည်။ ဩစတျေးလျ အနောက်ပိုင်းရှိ ၃.၄၈ ဘီလီယံနှစ်သက်တမ်းရှိ သဲကျောက်တွင် အဏုဇီဝကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဂရင်းလန်း အနောက်ပိုင်းရှိ နှစ်ပေါင်း ၃.၇ ဘီလီယံသက်တမ်းရှိ ဂရပ်ဖိုက်ကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် သက်ရှိ၏ရုပ်ကြွင်းတစ်ခုကို အနောက်ပိုင်း ဩစတျေးလျတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းသည် သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ၄.၁ ဘီလီယံ ရှိပြီဖြစ်သည်။ သုတေသနတစ်ယောက်၏အဆိုအရ အသက်ဇီဝသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လျင်မြန်စွာဖြစ်ထွန်းပါက စကြဝဠာတွင်လည်း တွေ့ရလေ့ရှိသောအရာဖြစ်နိုင်သည် ဟု ဆိုလေသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသက်ဇီဝဖြစ်ထွန်းခဲ့ကတည်းက ကြီးမားသော မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်မှုကြီး ၅ ခုနှင့် အခြားသောဖြစ်ရပ်သေးများသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ရုတ်တရက် လျော့ကျမှုကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်း ၅၄၀ အကြာက ဖာနီရိုဇိုးနစ် ကာလ (Phanerozoic eon) တွင် ပထမဆုံး ဆဲလ်များစွာရှိသောသက်ရှိ ဖြစ်ထွန်းမှုကြောင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲသည် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားခဲ့သည်။ နောက်ထပ် နှစ်သန်းပေါင်း ၄၀၀ မှာ ကြီးမားသော မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်မှုများဖြင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ကာဗွန်နီဖီးရိယပ် (Carboniferous) ကာလတွင် မိုးသစ်တော ပျက်စီးမှုကြောင့် အပင်နှင့် တိရစ္ဆာန်များစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်း ၂၅၁ အကြာကဖြစ်ခဲ့သော Permian–Triassic မျိုးသုဉ်းမှုဖြစ်ရပ်သည် အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်။ အပင်များပြန်လည်ရှင်သန်ရန် နှစ်သန်းပေါင်း ၃၀ အချိန်ယူခဲ့ရသည်။ များမကြာခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော Cretaceous–Paleogene မျိုးသုဉ်းမှုဖြစ်ရပ်သည် လူအများ၏ အာရုံစိုက်ခြင်းကိုခံရသည်။ အကြောင်းမှာ ယင်းဖြစ်ရပ်၌ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှင်သန်ခဲ့ဖူးသော ဒိုင်နိုဆောများ မျိုးသုဉ်းပျောက်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူသားများ အုပ်စိုးသည့်ကာလရောက်လာသောအခါ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ လျော့နည်းမှု ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။ လူသားများကြောင့်ဖြစ်သော မျိုးသုဉ်းမှုကို Holocene မျိုးသုဉ်းမှုဟုခေါ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂသည် ၂၀၁၁-၂၀၂၀ ခုနှစ်ကို ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ဆယ်စုနှစ်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ၂၀၂၁-၂၀၃၀ ခုနှစ်ကို ဂေဟစနစ် ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်စုနှစ်အဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။ IPBES မှ တင်ပြသော ၂၀၁၉ ခုနှစ် Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services အစီရင်ခံစာအရ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသော အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်တို့သည် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်မည့်အန္တာရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟုဆိုသည်။ IPBES ၏ ၂၀၂၀ အစီရင်ခံစာတွင်လည်း ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေသည့် လူသားတို့၏ တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကမ္ဘာကပ်ရောဂါ (Pandemic) များကို ဖြစ်စေသည်ဟုဆိုသည်။
↑ What is biodiversity?။ ကုလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်, World Conservation Monitoring Centre။ 29 August 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Field, Richard (1 January 2009). "Spatial species-richness gradients across scales:ameta-analysis". Journal of Biogeography 36 (1): 132–147. doi:10.1111/j.1365-2699.2008.01963.x.
↑ Gaston၊ Kevin J.; Spicer၊ John I. (2013-04-22)။ Biodiversity: An Introduction (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ John Wiley & Sons။ ISBN 978-1-118-68491-7။ 31 May 2021 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tittensor, Derek P. (28 July 2010). "Global patterns and predictors of marine biodiversity across taxa". Nature 466 (7310): 1098–1101. doi:10.1038/nature09329. PMID 20668450. Bibcode: 2010Natur.466.1098T.
↑ Myers, Norman (24 February 2000). "Biodiversity hotspots for conservation priorities". Nature 403 (6772): 853–858. doi:10.1038/35002501. PMID 10706275. Bibcode: 2000Natur.403..853M.
↑ McPeek, Mark A. (1 April 2007). "Clade Age and Not Diversification Rate Explains Species Richness among Animal Taxa". The American Naturalist 169 (4): E97–E106. doi:10.1086/512135. PMID 17427118.
↑ Peters၊ Shanan။ Sepkoski's Online Genus Database။ University of Wisconsin-Madison။ 8 March 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Charles Cockell; Christian Koeberl & Iain Gilmour (18 May 2006)။ Biological Processes Associated with Impact Events (1 ed.)။ Springer Science & Business Media။ pp. 197–219။ Bibcode:2006bpai.book.....C။ ISBN 978-3-540-25736-3။
↑ Algeo, T. J. (29 January 1998). "Terrestrial-marine teleconnections in the Devonian: links between the evolution of land plants, weathering processes, and marine anoxic events". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 353 (1365): 113–130. doi:10.1098/rstb.1998.0195.
↑ Bond, David P.G. (1 June 2008). "The role of sea-level change and marine anoxia in the Frasnian–Famennian (Late Devonian) mass extinction". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 263 (3–4): 107–118. doi:10.1016/j.palaeo.2008.02.015. Bibcode: 2008PPP...263..107B. Archived 29 August 2021 at the Wayback Machine.
↑ Kunin, W.E.; Gaston, Kevin, eds. (31 December 1996)။ The Biology of Rarity: Causes and consequences of rare—common differences။ ISBN 978-0-412-63380-5။ 26 May 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Stearns၊ Beverly Peterson; Stearns၊ S. C.; Stearns၊ Stephen C. (2000)။ Watching, from the Edge of Extinction။ Yale University Press။ p. preface x။ ISBN 978-0-300-08469-6။ 21 May 2020 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး ။ 30 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Novacek၊ Michael J.။ "Prehistory's Brilliant Future"၊ The New York Times၊ 8 November 2014။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 29 December 2014။
↑ G. Miller; Scott Spoolman (2012)။ Environmental Science – Biodiversity IsaCrucial Part of the Earth's Natural Capital။ Cengage Learning။ p. 62။ ISBN 978-1-133-70787-5။ 27 December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nuwer၊ Rachel။ "Counting All the DNA on Earth"၊ The New York Times၊ 18 July 2015။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 18 July 2015။
↑ The Biosphere: Diversity of Life။ Aspen Global Change Institute။2September 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Age of the Earth။ U.S. Geological Survey (1997)။ 23 December 2005 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Evidence of Archean life: Stromatolites and microfossils" (5 October 2007). Precambrian Research 158 (3–4): 141–155. doi:10.1016/j.precamres.2007.04.009. Bibcode: 2007PreR..158..141S.
↑ Hamilton Raven၊ Peter; Brooks Johnson၊ George (2002)။ Biology။ McGraw-Hill Education။ p. 68။ ISBN 978-0-07-112261-0။7July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Borenstein၊ Seth။ "Oldest fossil found: Meet your microbial mom"၊ AP News၊ 13 November 2013။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 29 June 2015။
↑ Pearlman၊ Jonathan။ "'Oldest signs of life on Earth found' – Scientists discover potentially oldest signs of life on Earth – 3.5 billion-year-old microbe traces in rocks in Australia"၊ The Telegraph၊ 13 November 2013။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on7May 2020။
↑ "Microbially Induced Sedimentary Structures Recording an Ancient Ecosystem in the ca. 3.48 Billion-Year-Old Dresser Formation, Pilbara, Western Australia" (8 November 2013). Astrobiology 13 (12): 1103–1124. doi:10.1089/ast.2013.1030. PMID 24205812. Bibcode: 2013AsBio..13.1103N.
↑ "Evidence for biogenic graphite in early Archaean Isua metasedimentary rocks" (8 December 2013). Nature Geoscience7(1): 25–28. doi:10.1038/ngeo2025. Bibcode: 2014NatGe...7...25O.
↑ ၃၁.၀ ၃၁.၁ Borenstein၊ Seth။ "Hints of life on what was thought to be desolate early Earth"၊ 19 October 2011။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 23 October 2015။
↑ "Potentially biogenic carbon preserved ina4.1 billion-year-old zircon" (24 November 2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112: 14518–14521. doi:10.1073/pnas.1517557112. PMID 26483481. Bibcode: 2015PNAS..11214518B.
↑ The Cambrian Period။ University of California Museum of Paleontology။ 15 May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sahney, S. (2010). "Rainforest collapse triggered Pennsylvanian tetrapod diversification in Euramerica". Geology 38 (12): 1079–1082. doi:10.1130/G31182.1. Bibcode: 2010Geo....38.1079S.
↑ "Recovery from the most profound mass extinction of all time" (2008). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 275 (1636): 759–765. doi:10.1098/rspb.2007.1370. PMID 18198148.
↑ Cretaceous-Tertiary mass extinction videos, news and facts။ BBC Nature။9June 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Vanishing fauna (Special issue)" (25 July 2014). Science 345 (6195): 392–412. doi:10.1126/science.345.6195.392. PMID 25061199. Bibcode: 2014Sci...345..392V.
↑ United Nations Decade on Biodiversity | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (in en)။9October 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ New UN Decade on Ecosystem Restoration to inspire bold UN Environment Assembly decisions (6 March 2019)။7December 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Staff။ "Media Release: Nature's Dangerous Decline 'Unprecedented'; Species Extinction Rates 'Accelerating'"၊ Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services၊6May 2019။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2019။
↑ Watts၊ Jonathan။ "Human society under urgent threat from loss of Earth's natural life"၊ The Guardian၊6May 2019။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2019။
↑ Plumer၊ Brad။ "Humans Are Speeding Extinction and Altering the Natural World at an 'Unprecedented' Pace"၊ The New York Times၊6May 2019။ 11 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 14 June 2019။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ&oldid=733206" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၈:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။